महिलाका १० उत्तेजित अंग जहाँ छुने वित्तिकै ‘करेन्ट’ लाग्छ - Nepali Virals
१९ माघ २०७२, मंगलवार ०७:३८	1,394 पटक-पढिएको
पुरुष र महिलाको यौनांगको समागमले मात्र चरम सन्तुष्टी प्राप्त हुन सक्दैन । यसका लागि त दुवैमा विशेषः कला हुन जरुरी छ । पुरुषलाई त स्खलनपछि केही हदसम्म सन्तुष्टी प्राप्त होला तर महिलालाई सन्तुष्टी प्राप्त गर्न त्यति सहज छैन । त्यसो त अवुझ जिवनसाथी परेको खण्डमा महिलाले जिवनभर यौन सन्तुष्टीबाट प्राप्त हुने स्वर्गीय आनन्दबाट वञ्चित हुन पर्छ । यसैकारण अनेक बाहानाबाजीमा कयौले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन ।
यौन सन्तुष्टि तब प्राप्त हुन्छ जब यौनसाथी उत्तेजित हुन्छ । महिला र पुरुष दुबैले दुबैलाई उत्तेजित बनाउन सकेको खण्डमा मात्रै दुबैले पूर्ण चरम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ । अत: पुरुषलाइ भन्दा महिलालाई उतेजनामा आउन बढी समय लाग्छ । यो कुरा पुरुषले बुझ्न नसकेको खण्डमा महिलाले कहिले पनि चरमसुख प्राप्त गर्न सक्दैन ।
स्नेहपूर्व भएर, सुमसुम्याए वा चुम्बन गरेर महिलाहरूमा कामोत्तेजना वृद्धि हुन्छ र उनीहरू यौनसम्पर्कका लागि बढी उत्प्रेरित हुन्छन् र त्यसबाट आनन्द पनि प्राप्त गर्छन्। अधिकांश पुरुष यौन सक्रियताका बेला माहिलाहरूलाई उत्तेजित गर्न तिनका एक वा दुई शारीरिक अंगमै बढी केन्द्रित हुन्छन् तर महिलाका शरीरमा कैयन् त्यस्ता अंग छन् जहाँ स्पर्श मात्र गर्दा पनि उत्तेजना उत्पन्न हुन्छ ।
१. पेटको तल्लो भाग
महिला शरीरको यो भाग पनि अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यो भागमा हल्का हातले मसाज गर्दा वा थोरै काउकुती लगाउँदा महिलामा कामोत्तेजना बढ्छ र उनीहरू यौनसम्पर्कका लागि तत्पर हुन्छन् ।
२. तिघ्राको भित्री भाग
तिघ्राको भित्री भाग अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । उक्त भागको छाला धेरै पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छ । त्यसैले यो भागलाई कामोत्तेजक मानिन्छ । यो भागमा स्नेहपूर्व भए, सुमसुम्याए वा चुम्बन गरे महिलाहरूमा कामोत्तेजना वृद्धि हुन्छ र उनीहरू यौनसम्पर्कका लागि बढी उत्प्रेरित हुन्छन् र त्यसबाट आनन्द पनि प्राप्त गर्छन् ।
गर्दन पछाडिको भागमा केश रेखाको ठीक मुनिदेखि लिएर कानपछाडिको भागसम्म अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यो हिस्सामा स्पर्श वा चुम्बन गर्नाले महिलाहरूमा कामोत्तेजना जागृत हुन्छ र उनीहरूले यौनसम्पर्कमा पर्याप्त आनन्द प्राप्त गर्छन् ।
९. हातका भित्री भाग
हातको भित्री भागको छाला अत्यन्त पातलो हुन्छ र त्यहाँ कैयन् उत्तेजक तत्त्व हुन्छन् । यो भागमा प्रेमपूर्ण क्रियाकलाप गर्नाले तुरु न्तै मस्तिष्कसम्म संकेत पुग्छ । यो भागमा यौनसाथीको स्पर्श मात्र पनि महिलाहरूलाई कामोत्तेजित गर्न पर्याप्त छ ।
१०. आँखाको परेला
आँखाको परेला पनि महिलाहरूलाई कामोत्तेजित गर्न सहयोगी हुन्छ । परेलामा प्रेमपूर्व चुम्बन उत्तेजित गर्नका लागि पर्याप्त हुन्छ । परेलाको छाला पातलो हुन्छ र कैयन् उत्तेजक तत्वको उपस्थितिले त्यसलाई संवेदनशील बनाउँछ ।
अघिल्लो क्यान इन्फोटेकका ५ आकर्षण
पछिल्लो यस्तो १० सपना जसले मृत्युको संकेत गर्छ